Fampihenana ny fahatsiarovan-tena - Ny valisoa valisoa
Home Resources Tsetsatsetsa henjana
Ny eritreritra dia tsy iza isika. Azo ovaina sy mavitrika izy ireo. Afaka mifehy azy ireo isika; tsy mila mifehy antsika izy ireo. Matetika lasa fahazarana misaina izy ireo saingy azontsika ovaina izany raha tsy mitondra fiadanam-po sy fahafaham-po ho antsika izy ireo rehefa fantatsika izany. Mahery vaika ny eritreritra amin'ny fanovàn'izy ireo ny karazana neurochemical izay vokarintsika ao amin'ny atidohantsika ary mety, rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny famerimberenana ampy, dia misy fiantraikany amin'ny firafiny mihitsy. Ny fahatsiarovan-tena dia fomba tsara iray ahafahantsika mahafantatra ireo mpamily fientanam-po tsy mahatsiaro tena ireo sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny toetrantsika sy ny fahatsapantsika. Afaka miverina mifehy isika.
Sekolim-pitsaboana Harvard fianarana nampiseho ireto valiny manaraka ireto izay nanaovan'ny lohahevitra ny fanazaran-tena momba ny fahatsiarovan-tena 27 minitra isan'andro:
• Ny fizahana MRI dia nampiseho fihenan'ny volondavenona (sela nerveux) amin'ny amygdala (tebiteby)
• Mitombo ny volondavenona ao amin'ny hippocampus - fitadidy sy fianarana
• Mamokatra tombony ara-psikolojika izay mitohy mandritra ny andro
• Ny fihenan'ny adin-tsaina voalaza fa
Andramo ny fandraisam-peo maimaim-poana
Use our fanazaran-tena amin'ny fialan-tsasatra lalina hanampy anao hiala sasatra sy hanova ny ati-dohanao. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famokarana neurochemical stress, avelanao ny vatanao hanasitrana ary ny sainao hampiasa angovo ho an'ny fahitana mahasoa sy hevitra vaovao.
Ity voalohany ity dia latsaky ny 3 minitra ny halavany ary hitondra anao ho any amoron-dranomasina mafana. Manatsara ny toe-tsaina avy hatrany.
Ity faharoa ity dia hanampy anao hamoaka ny fihenjanana amin'ny hozatrao. Maharitra 22.37 minitra fa afaka mahatsapa ho 5 fotsiny.
Ity fahatelo ity dia ny fampitoniana ny saina tsy mampiseho mariky ny hetsika ara-batana mba hahafahanao manao izany amin'ny lamasinina na rehefa misy ny hafa. Maharitra 18.13 minitra.
Ity fahefatra ity dia 16.15 minitra lava ary hitondra anao amin'ny dia majika amin'ny rahona. Tena miala sasatra.
Ny fisaintsainanay farany dia maharitra mihoatra ny 8 minitra ary manampy anao haka sary an-tsaina ireo zavatra tianao ho tratrarina amin'ny fiainanao.
Ny tsara indrindra dia ny manao fanatanjahan-tena alohan'ny fialantsasatra amin'ny maraina na amin'ny hariva. Avelao adiny iray, fara fahakeliny, aorian'ny fisakafoanana na anaovanao alohan'ny sakafo mba tsy hanelingelina ny fialan-tsasatrao ny fizotran'ny fandevonan-kanina. Matetika no tsara indrindra ny manao azy io amin'ny fipetrahana mitsangana amin'ny seza miaraka amin'ny hazondamosinao mahitsy fa ny olona sasany dia aleony manao azy mandry. Ny loza aterak'izany dia mety hatory ianao. Te-hanana fahatsiarovan-tena ianao mba hahafahanao mamoaka ireo eritreritra mampihetsi-po ireo. Tsy hypnosis izany, mijanona eo amin'ny fifehezana ianao.
Ireto misy vitsivitsy hafa mindfulness fisaintsainana avy amin'ny BBC.
<< Mampivelatra loharanon-karena ny TRF Boky natoro >>